Tsy mahita fahatsapana 3 amin'ny 5 ianao amin'ny famoahana hevitra | Martech Zone
Nanatrika fanasana fanao vao haingana tamin'ny famoahana printy tokana momba ny kolotsaina ara-tsakafo any afovoan-tany aho. Rehefa niresaka tamin'ny ekipa namorona aho dia nisy rehareha lehibe na ny atiny, na ny kanto, na ny vokatra vita. Hentitra ilay magazine ary afaka mahatsapa ny kalitaon'ny taratasy ianao, maimbo ny fanontana vaovao, ary efa ho andramo ny sakafo voatanisa be ao amin'ny magazine.
Nahatonga ahy hanomboka hieritreritra ireo fiheverana avelan'ny mpivarotra. Nihantona izaitsizy tokoa isika tamin'ny media nomerika ankehitriny noho ny vidiny ambany sy ny fahaizan'ny teknolojia ka hadinonay fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahita afa-tsy izay nataontsika tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy sary. Raha mandray izany isika, dia afaka manao horonantsary ahafahan'izy ireo manao izany ankehitriny jereo ary Mihainoa antsika. Saingy mbola izany ihany ny 2 amin'ireo fahatsapana 5 azontsika tratrarina.
Raha izay no tianao mitaiza firaka, tsy ny fanosehana mailaka hafa ao anaty boaty fotsiny. Mila mahatratra an'io firaka io ianao ary manaova fahatsapana raha te handroaka azy ireo ianao handray ny dingana manaraka mankany amin'ny fanaovana fividianana, fanaovana sonia fifanarahana, na fampitomboana ny fandaniany amin'ny fikambanananao.
Ahoana no hahatratraranao ny sisa amin'ny saina - mikasika, fofona ary tsiro - hamela fahatsapana maharitra? Raha ao amin'ny tanàna iray ihany ianao dia angamba tsotra toy ny fitondrana ny vinavinanao na ny mpanjifanao hisakafo hariva izany. Saingy maro amintsika no miasa ivelan'ny elanelan'ny fiara ka voafetra ihany ny safidy. Angamba azonao atao ny manana vokatra namboarina na vita pirinty tsara tarehy. Angamba azonao atao ny mampiditra tavoahangy misy divay na zava-manitra eo an-toerana nalefa tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Ny mahazatra dia efa tsy fahita ankehitriny - manondro fotoana tsy mampino hanavahana ny tenanao amin'ny fifaninanana ataonao. Inona no azonao atao mba hamela fahatsapana maharitra amin'ny fikasihana, ny fofona ary ny tsiro?
Tags: Fahatsapana 5b2b mitarika taranakafifandraisan'ny mpanjifafifandraisan'ny mpanjifaMihainoamitarika fikarakarana-barotrafikarakaranajereoanglisyfofonatsiromikasika